साम्राज्ञी भन्छिन्ः मैले साँचो बोलेकी छु, भुवन केसीले १० करोडको मुद्दा हाले पनि डराएकी छैन :: Setopati
साम्राज्ञी भन्छिन्ः मैले साँचो बोलेकी छु, भुवन केसीले १० करोडको मुद्दा हाले पनि डराएकी छैन
शोभा शर्मा काठमाडौं, साउन १४
गत साता अभिनेता भुवन केसीले १० करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्दै अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहविरूद्ध मुद्दा हाले।
साम्राज्ञीले विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन र युट्युब च्यानलमा आफूलाई यौन दुर्व्यवहारको मिथ्या आरोप लगाएर बेइज्जत गरेको भन्दै भुवन केसीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
साम्राज्ञी भने मुद्दै परे पनि आफूले काम गर्दा भोग्नुपरेका दुर्व्यवहारबारे बोलेर गल्ती नगरेको र आफू कत्ति नडराएको बताउँछिन्।
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, 'आफू काम गर्न जाने ठाउँमा सहज वातावरण होस् भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ। मलाई भने डेब्यु फिल्मको सेटमै निर्मातामध्ये एक भुवन केसीले गर्ने व्यवहारले असहज बनाएको थियो। आफूले भोगेका दुर्व्यवहार र असहज परिस्थितिबारे बोलेर मैले गल्ती गरेकी छैन, १० करोडकै मुद्दा दिनुभएको छ। तर म डराउँदिनँ।'
केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल 'इन्स्टाग्राम' मा भिडिओ पोस्ट गर्दै उनले आफूले काम गरेका आठ फिल्ममध्ये तीन वटामा नराम्रो अनुभव भोग्नुपरेको बताएकी थिइन्।
आफूमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटना बाहिर नल्याउन पटक-पटक दबाव आउनुका साथै 'घटना सार्वजनिक गरे फिल्मी करिअर नै खत्तम पार्दिने' डरसमेत देखाइएको उनले भिडिओमा भनेकी थिइन्।
'मैले १७ वर्षको उमेरमै चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरेँ। त्यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र सानो भएकाले सबै कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भनियो,' उनले भिडिओमा भनेकी थिइन्, 'यहाँ जसको शक्ति छ, उसैले यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ। यस्तो बेला म भर्खर चलचित्रमा आएको मान्छेले यो कुरा बाहिर ल्याउँदा मेरो लागि ढोका बन्द हुन्छ भनेर सम्झाउँथे।'
आफूले विश्वास गरेको र अभिभावकझैं मान्ने नजिकको मान्छेले नै त्यस किसिमको हर्कत गरेको उनको भनाइ थियो।
'अंकलजस्तो उमेरको मान्छेलाई त्यही भनेर सम्बोधन गर्दा दाइ भनेर बोलाऊ भन्थे,' उनले भनेकी थिइन्, 'कामको विषयमा केही कुरा गर्नुपरे गालामा टाँसिएर बोल्न आउँथे। त्यो कुरा अलि पर बसेर भन्न सकिँदैन थियो र?'
यसको जवाफ भुवन केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै दिएका थिए। पछि भने उनी 'बेइज्जत गरेको' भन्दै क्षतिपूर्ति मागसहितको मुद्दा लिएर अदालत गएका हुन्।
साम्राज्ञीको डेब्यू फिल्म 'ड्रिम्स' हो जसका निर्मातामध्ये एक थिए भुवन केसी।
एक हिसाबले भन्ने हो भने साम्राज्ञीलाई फिल्म क्षेत्रमा ल्याउन भुवन र उनका छोरा अनमोलको समेत भूमिका छ।
ड्रिम्स फिल्मको निर्माण सन्दर्भमा भुवन केसी र निर्माता रवि बस्नेतको भेट भइरहन्थ्यो। एक दिन सिनामंगलस्थित भुवनको घरमा उनीहरूको बैठक चलिरहेको थियो। फिल्मको काम, कलाकारका फोटादेखि डकुमेन्ट बनाउने काम सबै रविकै ल्यापटपमा हुन्थ्यो। अभिनेत्री खोजिरहेका बेला फोटा हेर्ने क्रममा ल्यापटपमा साम्राज्ञीको फोटो आयो।
अनमोलले 'यो को हो' भनेर सोधे। रविले भने- आफन्त, भान्जी पर्छिन्।
त्यसपछि सुरूमा अनमोलले नै भने, 'हाम्रो फिल्मका लागि यो केटी ठीक हुन्थ्यो।'
त्यसमै भुवनले थपे, 'ओहो यो कति क्युट केटी रहेछ। यसैलाई हिरोइन बनाऊँ। मेरो छोरालाई पनि सुहाउने खालको छ यार।'
रविले यो कुरा सुरूमा मानेका थिएनन्।
'यो राजघरानाको छोरी हो, कहाँ फिल्म खेलाउँछन्, हुन्न,' उनले भने। तर भुवन र अनमोल दुवैले कर गरेपछि रविले साम्राज्ञीको घरमा कुरा पुर्‍याएको बताउँछन्।
रविले साम्राज्ञीकी आमा नेहासँग फोनमै भुवन केसी र अनमोलको अफर सुनाए।
साम्राज्ञीलाई फिल्म खेलाउने कुरा परिवारका सबैले नकारे। आमा नेहाले भने फिल्म खेल्न पठाउने निधो गरिन्।
'त्यतिखेर मैले परिवारलाई केही हुन्न, केही भए म जिम्मा लिन्छु भनेर सम्झाएकी थिएँ,' उनले मंगलबार सेतोपाटीसँग भनिन्, 'यस्तै होला भनेर परिवार डराएको थियो। त्यही भयो।'
परिवारलाई राजी बनाएपछि नेहा र साम्राज्ञी भुवन केसीलाई भेट्न गए। पहिलो भेटमा भुवनको व्यवहार सहज र साधारण भएको साम्राज्ञी सम्झिन्छिन्।
फिल्ममा खेल्ने पक्का भएपछि सिनामंगलस्थित भुवनकै घरमा त्यो फिल्मको वर्कसप सुरू भयो। झन्डै २५ दिन भएको वर्कसपमै भुवनका कतिपय व्यवहार साम्राज्ञीलाई असहज लागेको थियो।
उक्त वर्कसपमा विभिन्न सिन र भूमिकाहरू कसरी गर्ने भनेर सिनियर कलाकारले तालिम दिन्थे।
वर्कसपमा उपस्थित एक कलाकारका अनुसार, एकदिन हिरो र हिरोइन बीचको सिन देखाउन खोजिएको थियो। हिरोले हिरोइनको हात समातेर तान्ने एउटा सिन अनमोल र साम्राज्ञीले गरे। त्यसपछि भूवनले 'तैंले यसरी कमेडी सिन गर्न सक्छस्' भन्दै आए। उनले सक्छु भनिन्।
'ल मसँग गर न त,' भुवनले भने। त्यतिबेला साम्राज्ञीको हात समातेर उनले निकै असहजपारामा आफूतिर ताने। साम्राज्ञीले प्रतिवाद गरेकी थिइन्।
'तपाईंले सिन गर्न किन आउनुपर्‍यो' भन्दै रिसाएर भुवनलाई धकेलिन् र रिसाउँदै अर्कैतिर गइन्। भुवन 'हाहाहा' गर्दै बसे।
रवि पनि त्यो फिल्मका निर्मातामध्ये एक थिए। उनी पनि वर्कसपमा भुवनले असहज व्यवहार गर्दा साम्राज्ञीले धकेलेको आफूले देखेको बताउँछन्।
साम्राज्ञीले रिहर्सल वा सुटिङमा डेमो गर्न पनि भुवन आइपुग्ने गरेको बताउँछिन्। त्यतिबेला आफूलाई निकै असहज लाग्ने गरेको उनले बताइन्।
ड्रिम्स फिल्मको पहिलो चरण सुटिङका लागि २०७२ साल वैशाख १ गते उनीहरू काठमाडौंबाट जोमसोमका लागि हिँडेका थिए। वर्कसपकै बेला भुवनका असहज लाग्ने 'जोक्स' र व्यवहार देखेकी साम्राज्ञीले सुटिङ गर्न जाँदा आफ्नी स्कुले साथी प्रनिका भण्डारीलाई साथ लगेकी थिइन्।
'हामीले सल्लाह गरेका थियौं कि कसैले कतै बोलाए सँगै जाने भनेर। उसलाई बोलाए म जान्थेँ, मलाई बोलाए ऊ आउँथी,' प्रनिकाले भनिन्।
उपल्लो मुस्ताङको छाकछुङमा पहिलो सुटिङ भएको थियो। वैशाख १२ को भुइँचालो बेला उनीहरू त्यहीँ थिए। भोलिपल्ट पनि काम गरेर पोखरा झरे।
दोस्रो चरणको सुटिङ जेठ ११ गतेदेखि पोखरामा सुरू भयो। यो बेलामा प्रनिका अलि छिट्टै काठमाडौं फर्किइन्। एकरात साम्राज्ञी एक्लै परिन्।
बेलुका कार्टुन हेर्दै पल्टिरहेकी भुसुक्कै निदाइछन्। राती सर्‍याकसुरूक आवाज आयो। यो आवाज सुनेर उनी आधामात्र ब्युँझेकी थिइन्। निद्रानिद्रामै उनले आफ्नो पेटमा काउकुती महशुस गरिन्। झसंग ब्युँझिइन्। ब्युँझिने र आफ्नो हात पेटमा लैजाने एकैपटक भयो।
त्योबेला उनको पेटमा अर्कैको खस्रो हात फेला पारिन्। उनी चिच्याइन्। अँध्यारैमा एउटा होचोहोचो आकृति खाटमुनिबाट उठेर झ्यालबाट भाग्यो। कोठाबाटै उनी निकैबेर चिच्याइन्।
उनले चिच्याएर 'मामा मामा' भन्दै रवि बस्नेतलाई बोलाइन्। रवि साम्राज्ञीका मामा पर्छन्। अर्को कोठामा रहेका रविले साम्राज्ञी चिच्याएको सुने। टिमका अरू सबैलाई उठाए। त्यतिबेला अनमोल केसी पनि उठेर आएका थिए।
साम्राज्ञीका कुरा सुनेपछि राती नै रविले प्रहरी बोलाए। प्रहरी आएपछि साम्राज्ञीलाई अल्लि ढुक्क भएछ।
बिहान उठेर उनीहरू सुटिङमा हिँड्न ठिक्क परेका थिए, भुवन केसीसँग भेट भयो। त्यो बेला भुवनले बोलेका कुराले आफूलाई निकै चोट पुगेको साम्राज्ञी बताउँछिन्।
'ओइ, तेरो कोठामा हिजो राती को आएछ? रेप गर्न आएको त होला नि, हाहाहा,' उनले त्यति बेला भुवनले भनेको सम्झिइन्। यति भनेर उनी गाडीमा चढेर कतै गए।
त्यतिबेला त्यहाँ रवि पनि थिए। उनले पनि भूवनकेसीले त्यसो भनेको सुनेको बताए।
'भुवनले साम्राज्ञीलाई 'को आएको, रेप गर्न त होला नि' भने र गए,' उनले सम्झिए,'मलाई निकै अप्ठेरो लाग्यो।'
'त्यो रात प्रहरी पनि आएको थियो। मलाई त सबले प्रहरीलाई रिपोर्ट गरेका छौं, को रहेछ पत्ता लाग्छ भनिएको थियो,' साम्राज्ञीले भनिन्,'धेरैपछि थाहा पाएँ प्रहरीलाई रिपोर्ट नै गरेको रहेनछ।'
त्यहाँ उपस्थित अर्का एक कलाकारका अनुसार, प्रहरीले भोलि आएर लिखित उजुरी गर्नू भनेर गएको थियो। तर भोलिपल्ट कोही पनि गएन।
भुवन केसी बोल्दा मात्र होइन, सहकर्मीनजिक जाँदा पनि उसलाई सहज हुन्छ-हुन्न भन्ने कुरा ख्याल गर्दैनन्। सबैलाई अँगालो मार्ने, धाप मार्ने उनको बानी भएको फिल्म क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन्।
'केटासँग भन्दा केटीसँग बढी फिजिकल हुने उनको बानी छ,' भुवनसँग काम गरेका एक फिल्मकर्मीले बताए।
तर भुवनको यस्तो बानीमा प्रश्न कसैले गरेको थिएन।
वर्कसप देखि सुटिङ सकिएपछिको खाली समयमा भूवनकेसीले सुन्न अप्ठेरो लाग्ने खालका जोक्स र सेक्सुअल कुरा सुनाउने गरेको साम्राज्ञी बताउँछिन्।
'कस्तो कस्तो जोक्सहरू भन्नुहुन्थ्यो, सेक्सुअल एक्सपिरियन्स पनि भन्ने। मलाई त्यत्रो ठूलो मानिसले त्यस्ता कुरा र जोक्स भनेको सुन्ने बानी थिएन। मलाई असहज भयो तर अरू चुप थिए। मैले तत्काल त आफूलाई असहज लागेको छ है भन्ने खालको संकेत दिएकी थिएँ। यसरी बाहिर आएर पनि बोल्न सकिनँ,' साम्राज्ञीले त्यो बेलाको क्षण सम्झिँदै भनिन्, 'म नयाँ थिएँ, सानै पनि थिएँ। कस्तो बेला कसलाई कहाँ के भन्न हुने हो, के नहुने थाहै भएन।'
यो क्षेत्रमा काम गरेको अलि समयपछि भने उनले बाहिर आएर पटकपटक यो कुरा भन्न खोजेको बताइन्।
'मैले दुई वर्षअघि एउटा अन्तर्वार्तामा यी कुरा बताउन खोज्दा मात्र पनि त्यहाँ सबैले यति ठूला आँखा बनाए। अनि म हच्किएँ,' उनले भने, 'मलाई यत्ति कुरा भन्न पनि समय लाग्यो। अहिले मात्र भन्न सकेँ।'
उनले केहीसमय अघि आफ्नो इन्स्टाग्राममा भिडिओ पोष्ट गरेर आफू दुर्व्यवहारमा परेको बताएकी थिइन्। त्यो बेला उनले कसैको नाम लिएकी छैनन्। उनको भिडिओको जवाफ भुवन आफैंले दिए।
अहिले भुवन र उनको टिमले आफूलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, युट्युब र मिडियामार्फत हुने-नहुने सबै भनेको साम्राज्ञी बताउँछिन्। उनलाई सबभन्दा बढी आफ्नी आमालाई लिएर जथाभावी भनेकोमा चित्त दुखेको छ।
'मैले आफ्ना कुरा राखेँ। त्यसपछि उहाँले पनि मलाई नानाथरी भन्नुभयो। मुद्दै हाल्नुभयो। मसँगको रिसिइबीमा अहिले आमालाई पनि तानिएको छ। मलाई यसले पनि निकै चोट पुर्‍याएको छ,' उनले भनिन्।
उनले थपिन्,'आफैले खोजेर फिल्मक्षेत्रमा ल्याएकी हिरोइन हो यसैले मलाई एक्सपोज गर्ने? भनेर उहाँलाई रिस उठ्या होला तर म उहाँले जे गरेपनि सहेर त बस्ने कुरा हुन्न।
उनकी आमा नेहाले पनि आफूलाई समेत तानेर अनर्गल प्रचार गरेकोमा आपत्ति जनाएकी छन्।
'अब केही सिप नलागेर मलाई तानिएको छ। हामी डटेर मुद्दा लड्छौं। मेरी छोरीलाई मेरो मात्र होइन, परिवारको साथ छ,' नेहाले भनिन्, 'यो साम्राज्ञीको मात्र कुरा होइन। हाम्रा छोरीहरू काम गर्न जाने ठाउँमा उनीहरूले सहज वातावरण पाउनुपर्छ।'
साम्राज्ञीले दुर्व्यवहारबारे बोलेपछि उनका धेरै फ्यानहरूले आफूलाई पनि 'हामी साथमा छौं' भनेर मेसेज पठाएको नेहाले बताइन्।
'त्यसपछिका दिनमा कम्तिमा पनि ३ सय मेसेज आउँथे। साम्राज्ञीको साथमा हामी छौं भन्दै। यिनै मेसेज देखेर उसलाई बल मिलेको छ। हामीलाई शक्ति मिलेको छ,' नेहाले भनिन्।
इन्स्टाग्राममा भिडिओ पोष्ट गर्दै साम्राज्ञीले दुर्व्यवहारदेखि सुटिङका दौरान समयमा खान नपाएका अनुभव समेत बताएकी थिइन्।
'मलाई त्यतिबेलै भित्रबाटै घिन लागेको थियो, तर हाँसेरै बोलिदिएँ। मेरो परिवारलाई फिल्म क्षेत्रको विषय केही ज्ञान छैन। मैले पनि त्यतिबेला यो कुरा नजरअन्दाज गरेँ। तर आखिरमा सबैको असली रूप बाहिर आएको छ,' उनले भिडियोमा भनेकी थिइन्।
साम्राज्ञीको पहिलो फिल्म 'ड्रिम्स' व्यावसायिक रूपमा सफल भयो। यसबाट चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहन मिले पनि सँगसँगै खुट्टा तान्ने मान्छेको सामना गर्नुपरेको उनले बताएकी छन्।
'हरेक फिल्मको प्रचारप्रसारमा जाँदा मलाई तपाईं किन घमन्डी हुनुहुन्छ भनेर सोधिन्थ्यो। मलाई भेट्दै नभेटेको, चिन्दै नचिनेको मान्छेले पनि म घमन्डी छु भनेर धारणा बनाइसकेका थिए। यसले मलाई दिक्क बनाउथ्यो। अन्तिममा थाहा पाएँ, जोसँग काम गर्दै आएकी थिएँ, उनीहरूले नै मेरोबारे अफवाह फैलाएका रहेछन्,' उनले भनेकी थिइन्।
साम्राज्ञीले काम गरेको प्राय: ब्यानरमा उनी दोहोरिएकी छैनन्। यसो हुनुमा फिल्म क्षेत्रका केही सहकर्मीले गर्ने व्यवहारलाई उनी कारण बताउँछिन्।
सुटिङ बेला समयमा खाना, पानी नपाएको कुरा उठाउँदासमेत अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गरिएको उनी बताउँछिन्। यस्तो बेला कयौंपटक रूनु परेको र फेरि केही नभएजस्तो नाटक गर्दै काममा फर्किनु परेको अनुभव उनले सुनाइन्।
साम्राज्ञीको भिडिओ भाइरल भएलगत्तै भुवन केसीले फेसबुकमा लेखेका थिए, 'खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोइकराइ गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छन्? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने। सामाजिक सञ्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि!'
भुवनको यस्तो प्रतिक्रियापछि साम्राज्ञी फेरि बोलेकी थिइन्।
'उहाँले मसँग राम्रो व्यवहार गरेको भए मैले यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो। यो हुनुको कारण उहाँ आफैं हो। यो विषयमा कति जनाले बोल्नुभयो होला, तर कसैले नसुनेको पनि हुनसक्छ। उनी त पहिलो व्यक्ति हुन्, त्यसपछि मलाई कति जनाले के गरेको छ, तर म चुप लागेर बसिरहेको छु,' साम्राज्ञीको भनाइ थियो।
आफूले यो विषयमा बोल्दा माया वा घृणा जे पनि आउनसक्ने उनी बताउँछिन्। नराम्रो प्रतिक्रियाको बानी परिसकेको पनि बताएकी थिइन्।
साम्राज्ञीपछि क्यानडा बस्दै आएकी एक महिलाले पनि आफूले अभिनेता भुवन केसीबाट अप्ठ्यारो अनुभव गरेको बताएकी छन्।फेसबुकमा भुवनसँगको च्याटको स्क्रिन भिडिओ राख्दै स्वेता रेग्मी नामकी महिलाले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।
उनले फेसबुक लाइभमा आएर भुवनको बोल्ने शैलीबाट असहज महशुस भएको बताएकी थिइन्। रेग्मीले सार्वजनिक गरेको च्याटको स्क्रिन भिडिओमा उनले आफूलाई आपत्तिजनक लागेका भुवनका भनाइमा रातो घेरा लगाएकी थिइन्।
यसैगरी साम्राज्ञीसँग प्रत्यक्ष चिनजान नभए पनि उनको दुर्व्यवहारसम्बन्धी भिडिओ हेरेपछि आफूले पनि यसबारे बोल्नु पर्ने लागेर बोलेको स्वेताले बताएकी थिइन्।
'जसलाई परेको हो उसले आफूलाई सहज लागेको बेला भन्ने अधिकार छ र त्यसमाथि कसैले पहिला किन नभनेको?' भनेर प्रश्न गर्नु उचित नहुने स्वेताको भनाइ थियो।
उनले भिडिओमा आफू एउटा पीडित भएरभन्दा पनि यस्ता घटनामा साथ दिन आएको बताएकी थिइन्।
यसैगरी उनले आफूले क्यानडामा काम गर्दा उच्च तहका पुरूष कर्मचारीले निरन्तर आफ्नो पहिरन र शरीरलाई लिएर गरेको अशोभनीय र असहज टिप्पणीबारे काम गर्न छाडेको पाँच वर्षपछि मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दा जितेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा चुप नबस्न आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १५, २०७७
एक हातले राजीनामा, अर्को हातमा राजदूतको सिफारिस
बाँकेमा थप दुई जनाको कोरोनाले मृत्यु
बैंकिङ कसूरमा एक करोड ६५ लाख जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय पाएका व्यक्ति ललितपुरबाट पक्राउ
सुर्खेतमा घरमै मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना पोजेटिभ
बर्दी लगाएरै असईको परीक्षा चलाउने नक्कली इन्स्पेक्टर पक्राउ
बुटवलमा कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
जटिल अवस्थामा वृद्ध-वृद्धा विज्ञा चापागाई
बाल विश्वास बिजयकुमार श्रेष्ठ
सुकेको नदी राकेश कार्की